Kune akawanda marudzi eepasi mavhavha. Vanosarudzwa sei
Zvinoenderana nesimbi yekuisa chisimbiso, vharuvhu yepasi inogona kukamurwa muzvikamu zviviri: yakapfava yekuisa chisimbiso girafu vharuvhu uye simbi yakaoma yekuisa chisimbiso chevhavhavhavha. Maererano nemamiriro dhisiki anogona kukamurwa muzvikamu zviviri: dhisiki pakati nepakati vharafu dhisiki uye dhisiki unbalanced globe vharafu; Chibvumirano ...
Anoshanda musimboti uye mashandiro nzira yevhu vharuvhu zvinoongororwa
Mukugadzirwa uye kupomba kwemaitiro emarasha emakemikari musangano, vharafu yekumira inowanzo shandiswa. Heino yekuongorora kushanda kwayo musimboti uye mashandiro. Nhasi, tichazvinzwisisa pamwe chete. Globe vharuvhu, inozivikanwawo seyakagurwa-vhara vharuvhu, ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mavharuvhu. Iyo inozivikanwa nekuti kukakavara ...
Gedhi vharafu ndeimwe yeanonyanya kushandiswa akacheka-akacheka mavharuvhu. Ndeapi maitiro ayo
Hunhu hwenyika yevhavhavhavhavhavhavhavhiti 1, iyo nguva yekuvhura nekuvhara idiki nekuti vheji yegedhi painovhurwa nekuvharwa, mafambiro ekufambisa kweiyo ndiro ndiro yakanangana nekufamba kwekufamba kwepakati. Zvichienzaniswa nevhavha yepasi rose, kuvhura nekuvhara ...
Pfupi sumo dzakasiyana dzakateedzana dzegedhi mavharuvhu
Zvinoenderana nechimiro chekuisa chisimbiso zvinhu, mavhavha egedhi anowanzo kuve akapatsanurwa kuita akati wandei akasiyana mhando, senge: wedge vheji vharafu, yakafanana gate vharafu, yakafanana mbiri mbiri gedhi vharafu, wedge mbiri gedhi gedhi, nezvimwe. parallel mavharuvhu. 1. Nerima tsvimbo ...
Sei maRussia akaenzana magedhi mavhavha asina kukodzera kudzora kana kupwanya mashandisiro
Iyo Russian standard gedhi vharafu inowanzo kuve yakakodzera kune iyo mamiriro ayo asingade kuvhura nekuvhara kazhinji, uye inochengeta gedhi rakashama rakazara kana rakanyatso kuvharwa. Kwete kuitirwa kuti ishandiswe semutongi kana kubhowa. Kune yekumhanyisa kuyerera midhiya, iyo gedhi vibration inogona kukonzerwa kana gedhi riri parti ...
American standard vharuvhu kumanikidza uye yenyika yakajairwa vharuvhu kumanikidza kutendeuka sumo
Isu tinowanzoshandisa Pn, Kirasi, inzira yekumanikidza, mutsauko ndewekuti vanomiririra kumanikidza kuri pasi peyakaenderana tembiricha tembiricha yakasiyana, Pn European system inoreva kumanikidza kunoenderana pa120 ℃, nepo American standard ichireva kumanikidza kunoenderana pa 425 ....
Ndeupi musiyano uripo pakati pemaAmerican standard valves nemaGerman standard uye yenyika standard mavhavha?
(American standard, chiGerman standard, yenyika standard) mutsauko pakati pemavharuvhu: Chekutanga, kubva kune yakajairwa kodhi yenyika yega yega inogona kusiyaniswa: GB ndiyo yenyika muyero, American standard (ANSI), chiGerman standard (DIN). Kechipiri, iwe unogona kusiyanisa kubva kune iyo modhi, iyo nyika ...
MaAmerican standard valves akagadzirwa, akagadzirwa, akagadzirwa uye akaedzwa zvinoenderana nemaAmerican zviyero
American mureza mavharuvhu vari kunyanya API uye ASME zvinodiwa, ASTM, ASTM ndiyo zvinhu mureza; Mavharuvhu akagadzirwa, akagadzirwa, akagadzirwa uye akaedzwa zvinoenderana nemaAmerican standards anonzi maAmerican standard valves. American standard vharuvhu iri inoyerera kuendesa system kudzora zvikamu, i ...